लेख > भगवानको अनुग्रह > अनुग्रहको सार
कहिलेकाँही म चिन्ताहरू सुन्छु कि हामी अनुग्रहमा धेरै जोड दिन्छौं। सिफारिस गरिएको सुधारवादीको रूपमा, यो तर्क प्रस्तुत गरियो कि अनुग्रहको शिक्षालाई प्रतिरोधात्मक रूपमा, धर्मशास्त्रमा र विशेष गरी नयाँ नियममा उल्लेख गरिएका आज्ञाकारिता, न्याय र अन्य कर्तव्यहरूको बारेमा हामी विचार गर्न सक्छौं। जो "धेरै अनुग्रह" को बारे मा चिन्तित छन् वैध चासो छ। दुर्भाग्यवस, केहि सिकाउँछन् कि हामी कसरी बाँच्छौं असान्दर्भिक छ यदि हामीले कामहरू भन्दा अनुग्रहबाट बचाइयौं भने। उनीहरूको लागि अनुग्रह कुनै दायित्व, नियम, वा अपेक्षित सम्बन्ध बान्कीहरू नजान्नको बराबर हो। उनीहरूको लागि अनुग्रहको अर्थ भनेको धेरै नै सबै चीजलाई स्वीकार गरिन्छ, किनकि सबै कुरा पहिले नै क्षमा भइसकेको छ। यस गलत धारणा अनुसार अनुग्रह एक नि: शुल्क टिकट हो - केहि हदसम्म रिक्त शक्ति अफरनी तपाईलाई चाहानुहुन्छ गर्न सक्षम हुन।
प्रेरित पावलको नाम-विरोधीको आरोपको जवाफ स्पष्ट थियो। जो कोही तर्क गर्छन् कि अनुग्रहको अर्थ यो छ कि सबै कुरा अनुमति छ किनकि यो विश्वासले ढाकिएको छ भने गलत छ। तर किन? त्यहाँ के गल्ती भयो? के समस्या वास्तवमै "धेरै दया" हो? र के उहाँको समाधानमा वास्तवमा यस अनुग्रहलाई प्रतिरोध गर्ने सामिल छ?
वास्तविक समस्या विश्वास गर्नु हो कि अनुग्रहको अर्थ परमेश्वर नियम, आदेश, वा दायित्व अपवाद हो। यदि अनुग्रहले वास्तवमा अनुदान दिने नियमहरू अपवादमा निहित गर्दछ भने, हो, धेरै अनुग्रहको साथ त्यहाँ धेरै अपवादहरू हुनेछन्। अनि यदि हामी भगवान्‌लाई कृपा देखाउँछौं भने, हामीले गर्नुपर्ने हरेक दायित्व वा कामबाट उसले छुट पाएको आशा गर्न सक्छौं। आज्ञाकारिताको अधिक अपवाद अधिक अनुग्रह। र कम दया, थोरै अपवादहरू, एक राम्रो सानो सम्झौता।
यस्तो योजना शायद राम्रो वर्णन गर्दछ जुन मानव अनुग्रहले उत्तम गर्न सक्दछ। तर यो नबिर्सनुहोस् कि यो दृष्टिकोणले आज्ञाकारितामा अनुग्रहको नाप गर्दछ। उसले एक अर्काको बिरूद्ध दुईवटा सेट सेट गर्छ, जसको परिणामस्वरूप निरन्तर पछाडि र अगाडि झगडा हुन्छ, जुन कहिले आराम हुँदैन, किनभने दुबै एक अर्कासँग झगडामा छन्। दुबै पक्षले एक अर्काको सफलतालाई नकार्छन्। भाग्यवस, यस्तो योजनाले परमेश्वरको अनुग्रह प्रतिबिम्बित गर्दैन। अनुग्रहको बारेमा सत्यले हामीलाई यस गलत दुविधाबाट मुक्त गर्दछ।
व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको अनुग्रह
के परमेश्वर सधैं दयालु हुनुहुन्छ?
यो गलत दृष्टिकोणले कानूनलाई परमेश्वरको प्रकृतिको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा मान्दछ र यसरी उहाँ आफ्नो सृष्टिसँगको सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो ईश्वर मूलत: एक ईन्टरनेट ईश्वर हो जसको कानून र सर्तका आधारमा उसको सृष्टिसँग सम्बन्ध छ। उसले "मास्टर र दास" सिद्धान्त अनुसार यो सम्बन्ध नेतृत्व गर्दछ। यस धारणा अनुसार, परमेश्वरको उदारता, उनको भलाइ र आशिषको हिसाबले, क्षमा सहित, उनले प्रचार गर्ने परमेश्वरको मूर्तिको सारबाट धेरै टाढा छ।
सामान्यतया, भगवान शुद्ध इच्छा वा शुद्ध कानूनीताको पक्षमा हुनुहुन्न। यो विशेष गरी स्पष्ट हुन्छ जब हामी येशूलाई हेर्दछौं, जसले हामीलाई पिता देखाउँछन् र पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ। जब हामी येशूबाट उहाँको पिता र पवित्र आत्मासँगको अनन्त सम्बन्धको बारेमा सुन्छौं तब यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। उसले हामीलाई जान्न दिन्छ कि उसको स्वभाव र चरित्र पिताको जस्तै छ। बुबा-छोराको सम्बन्ध नियम, दायित्व वा सर्तहरूको पूर्ति द्वारा आकार प्राप्त हुँदैन यस प्रकार लाभ लिनको लागि। बुबा र छोरा एक अर्कासँग कानुनी सम्बन्धमा छैनन्। तपाईंले एक अर्कासँग सम्झौता गर्नुभएको छैन, यस हिसाबले यदि एक पार्टी पालना गर्दैन भने, अर्को समान रूपमा गैर प्रदर्शनको लागि हकदार छ। बुबा र छोरा बीच एक अनुबंध, कानूनमा आधारित सम्बन्ध को विचार बेवास्ताको छ। येशूद्वारा प्रकट गरिएको सत्यता भनेको यो हो कि तिनीहरूको सम्बन्धलाई पवित्र प्रेम, निष्ठा, आत्मसमर्पण र आपसी महिमाले देखाउँदछ। येशूको प्रार्थना, जसलाई हामी यूहन्नाको सुसमाचारको अध्याय १ read मा पढ्छौं, यसले यो स्पष्ट पार्दछ कि त्रिएक सम्बन्ध प्रत्येक सम्बन्धमा परमेश्वरको कार्यको लागि आधार र स्रोत हो; किनभने ऊ सधैं आफैंले काम गर्छ किनकि ऊ आफैंमा सत्य छ।
उत्पत्तिको पहिलो अध्यायलाई नियालेर हेर्दा यो पनि थाहा पाउँदछ कि एक किसिमको करारका करार अनुसार परमेश्वर आफ्नो सृष्टिमा गलत हुनुहुन्न। सबैभन्दा पहिले, सृष्टि आफैंले स्वैच्छिक दिने कार्य हो। त्यहाँ त्यस्तो केहि थिएन जुन अस्तित्वको अधिकारको योग्य थियो, राम्रो अस्तित्व भन्दा धेरै कम। परमेश्वर आफैंले व्याख्या गर्नुहुन्छ: «र यो राम्रो थियो yes, हो,« धेरै राम्रो »। परमेश्वरले उसको भलाईलाई उसको सृष्टिबाट स्वतन्त्र रूपमा फाइदा लिन अनुमति दिनुहुन्छ, जुन उहाँभन्दा निकै कम छ; उसले उसलाई जीवन दिन्छ। हव्वा आदमको लागि परमेश्वरको दयालु उपहार थियो ताकि उनी अब एक्लै रहन सकेनन्। त्यस्तै गरी, सर्वशक्तिमान्‌ले आदम र हव्वालाई अदनको बगैंचा दिए र तिनीहरूको हेरचाह गर्नु यसरी लाभदायक काम भयो कि यो उर्वर भयो र प्रशस्त जीवन बाँचोस्। आदम र हव्वाले कुनै शर्तहरू पूरा गरेनन् किनकि उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा यी उत्तम उपहारहरू प्रदान गर्नु अघि।
तर जब यो आक्रोश आयो पतन पछि यो कस्तो थियो? यसले देखाउँदछ कि परमेश्वर स्वैच्छिक र बिना शर्त कार्य गर्नुहुन्छ। आदम र हव्वाको अनाज्ञाकारिता पछि पश्चात्तापको सम्भावना दिन उनको अनुरोध अनुग्रहको काम होइन र? भगवानले उनीहरूलाई लुगाका निम्ति कसरी फर प्रदान गर्नुभयो भनेर पनि विचार गर्नुहोस्। अदनको बगैंचाबाट उनको निष्कासन पनि अनुग्रहको कार्य थियो जसले उसलाई आफ्नो पापपूर्ण जीवनमा जीवनको रूख प्रयोग गर्नबाट रोक्नु पर्दछ। कयिनप्रतिको परमेश्वरको सुरक्षा र प्रोभिडिनेसन एकै उज्यालोमा मात्र देख्न सकिन्छ। हामी नूह र उसको परिवारलाई सुरक्षामा र इन्द्रेणीको रूपमा आश्वासन दियौं भन्ने कुरामा हामी परमेश्वरको अनुग्रह देख्छौं। यी सबै अनुग्रहका कार्यहरू परमेश्वरको भलाइको स in्केतमा स्वेच्छाले उपहार दिइन्छ। ती मध्ये कुनै पनि कुनै पनि प्रकारको पूरा गर्नका लागि ज्याला हो, साना, कानूनी कानुनी बाध्यकारी अनुबंधात्मक दायित्वहरू।
अनुग्रह परोपकारी को रूप मा अनुग्रह?
परमेश्वरले सधैं आफ्नो सृष्टिलाई स्वतन्त्रतासाथ उहाँको भलाइमा बाँड्न अनुमति दिनुहुन्छ। उसले सदासर्वदा आफ्नो पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको रूपमा बाहिरबाट यो गर्दछ। यस ट्रिनिटीले सृष्टिमा देख्ने सबै कुरा यसको आन्तरिक समुदायको प्रशस्तताबाट हुन्छ। परमेश्वरसँग एउटा कानुनी र करारको सम्बन्धले त्रिएकको निर्माता र करारका सृष्टिकर्तालाई सम्मान गर्दैन, तर उनको शुद्ध मूर्ति बनाउँदछ। मूर्तिहरू जहिले पनि उनीहरूसँग अनुबन्धित सम्बन्धहरूमा प्रवेश गर्छन् जसले मान्यताका लागि आफ्नो भोक मेटाउँछन् किनभने तिनीहरूलाई आफ्ना अनुयायीहरूलाई आवश्यक छ उनीहरूलाई उनीहरूको आवश्यक छ। दुबै परस्पर निर्भर छन्। यसैले तिनीहरू एक अर्कालाई आफ्नो सेल्फ-सर्भिंग गोलहरूको लागि लाभ उठाउँछन्। सत्यको अन्न भनेको यो हो कि अनुग्रह भनेको परमेश्वरको अनुग्रहको अनुग्रह हो भन्ने कुरा केवल यो मात्र हो कि हामी यसको योग्य छैनौं।
परमेश्वरको भलाईले खराबीलाई जित्छ
अनुग्रह कुनै कानून वा दायित्व अपवादको रूपमा पापको मामिलामा मात्र खेलमा आउँदैन। पापको वास्तविक प्रकृति जस्तोसुकै भए पनि भगवान दयालु हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा, अनुगमन गर्न पापी पापीपनको आवश्यक पर्दैन। बरु पाप छ भने पनि उहाँको अनुग्रह रहिरहन्छ। त्यसकारण यो सत्य हो कि परमेश्वरले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सृष्टिलाई उहाँको भलाई प्रदान गर्न छोड्नुहुन्न, यद्यपि यो यसको योग्य छैन भने पनि। त्यसपछि उसले स्वेच्छाले उसलाई आफ्नै मेलमिलापको बलिदानको मूल्यमा माफ गर्‍यो।
हाम्रो पापी जस्तोसुकै भए पनि भगवान दयालु हुनुहुन्छ। ऊ आफ्नो सृष्टिप्रति वफादार छ र उसको लागि यसको शुभ भाग्यमा समात्छ। हामी यो कुरा येशूबाट पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छौं, जसले आफ्नो प्रायश्चितको प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँ विरुद्ध उठ्ने कुनै पनि दुष्ट शक्तिबाट वञ्चित हुन सक्दैन। दुष्टका शक्तिहरूले उहाँलाई हाम्रो जीवन दिनदेखि रोक्न सक्दैन ताकि हामी बाँच्न सकौं। न त पीडा र कष्ट, न त अत्यन्तै अपमानले उनलाई आफ्नो पवित्र, प्रेम-आधारित भाग्यको अनुसरण गर्न र मानिसहरूलाई परमेश्वरमा मिलाप गर्नबाट रोक्न सक्छ। परमेश्वरको भलाईको लागि त्यो खराबी असलमा परिणत हुनु आवश्यक छैन। तर जब यो खराबीको कुरा आउँछ, भलाइलाई के गर्नु पर्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ: यसलाई परास्त गर्न, पराजित गर्न र यसलाई जित्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ धेरै अनुग्रह छैन।
अनुग्रह: कानून र आज्ञाकारिता?
के ईश्वरको भलाईप्रति हाम्रो प्रतिक्रिया छ?
पावलले हामीलाई भनेझैं परमेश्वरको करार अपरिवर्तनीय छ। किन? किनभने सर्वशक्तिमान उहाँलाई विश्वासीपूर्वक समात्छ र हेरचाह गर्दछ, चाहे यसको लागतमा आयो। परमेश्वर आफ्नो वचनबाट कहिल्यै हट्नुहुनेछैन; उसलाई आफ्नो सृष्टि वा आफ्ना मानिसहरूसँग विदेशी व्यवहार गर्न बाध्य गर्न सकिदैन। हाम्रो आश्वासनको अभावको बाबजुद पनि हामी उहाँलाई आफूप्रति वफादार हुन सक्दैनौं। यसको मतलब यो हो जब परमेश्वरले "आफ्नो नामको खातिर कार्य गर्नुहुन्छ" भन्ने गरिन्छ।
आज्ञाकारिताको जरा के हो?
दयामा कुनै अपवाद छैन!
के परमेश्वर हामीप्रति दयालु हुनुहुन्छ र अन्ततः हामीलाई असिद्ध छोड्नुहुन्छ? यदि त्यहाँ स्वर्गमा शासन गर्न अपवाद मात्र थिए भने - यदि यहाँ विश्वासको कमी छ भने, त्यहाँ एक प्रेमहीनता छ, यहाँ एक सानो असन्तुलनता र त्यहाँ एक सानो कटुता र असन्तोष, यहाँ एक सानो असन्तुष्टि र एक सानो आत्म-भोग त्यहाँ फरक छैन। त्यसोभए हाम्रो अवस्था कस्तो हुनेछ? खैर, एक जुन यहाँ र अहिलेको जस्तो छ, तर सँधै रहनेछ! के उहाँ साँच्चै दयालु र दयालु हुनुहुनेछ यदि उहाँले हामीलाई सदाको लागि यस्तो आपतकालीन अवस्थामा छोड्नुभयो? No! अन्ततः, परमेश्वरको अनुग्रहले अपवादहरूको लागि अनुमति दिँदैन - न त उहाँ आफ्नो प्रचलित अनुग्रहको बारेमा, न त उहाँको ईश्वरीय प्रेमको नियम र उहाँको उदार इच्छाको सन्दर्भमा; अन्यथा ऊ दयालु हुने छैन।
परमेश्वरको अनुग्रह दुरुपयोग गर्नेहरूको सामना गर्न हामी के गर्न सक्छौं?
मानिसहरूलाई येशूको अनुसरण गर्न सिकाएर, हामीले उनीहरूलाई गल्ती र गर्वका साथ विरोध गर्नुको सट्टा परमेश्वरको अनुग्रह बुझ्न र सिक्न सिकाउनु पर्छ। हामीले तिनीहरूलाई यहाँ र अहिलेमा ल्याएको अनुग्रहमा बस्न सहयोग गर्नुपर्दछ। हामीले उनीहरूलाई थाहा दिनुपर्दछ सर्वशक्तिमान्, उनीहरू जेसुकै गरे पनि तिनीहरू आफैं र आफ्नो उद्देश्यका लागि सत्य हुनेछन्। हामीले उनीहरूलाई बुझ्नु पर्दछ कि उहाँप्रति उनको प्रेम, अनुकम्पा, आफ्नै स्वभाव र आत्मनिर्णयको उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी परमेश्वर आफ्नो अनुग्रहको प्रतिरोध गर्न प्रतिरोध गर्नुहुन्छ। नतिजा स्वरूप, एक दिन हामी सबै अनुग्रहको पूर्णतामा बाँडिनेछौं र दयाको जीवन बिताउनेछौं। यस तरिकाले, हामी खुशीसाथ यससँग सम्बन्धित "दायित्वहरू" लाई ग्रहण गर्नेछौं - हाम्रो जेठो भाइ, येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको सन्तान हुने सुअवसरको बारेमा पूर्ण रूपले जान्दछौं।